Nagu saabsan - Xinneng Qalabka Qaboojiyaha Co., Ltd.
La aasaasay in ka badan 10 sano ka hor Esineng waxay soo saartaa qalab tayo sare leh oo qoraxda ku shaqeeya oo magaceeda la yaqaan lana gaarsiiyo adduunka oo dhan.
Shirkaddu waa soo saare xirfadlayaal yar-yar oo dhexdhexaad ah oo ka kooban soolmaallo qorraxda lagu dhejiyo. Waxay muddo dheer ka dhoofinaysay ganacsiga iyada oo loo sii marayo shirkadaha ganacsiga shisheeye. Hadda shirkaddu waxay go'aansatay inay si madax-bannaan u fuliso ganacsiga ganacsiga ajaanibta ah. Milkiilayaashu waxay arkeen furitaanka suuqa qalabka tamarta tamarta badan leh oo lagu biirinayo qoraxda si ay si weyn hoos ugu dhigto kharashka ku baxa macaamiisha sidoo kalena ay ka ciyaaraan qayb mas'uul ah si loo yareeyo kuleylka adduunka ee iman kara.
Ku biiritaanka xooggooda walaasheed shirkadda qaboojiyaha waxay bilaabeen nashqadeynta nidaamyada qorraxda / qaboojiyaha ee ka faa'iideysta 100% tamarta qorraxda qaabab kala duwan oo nidaamsan. Intaa waxaa dheer, si loo siiyo ciyaar buuxda oo ku saabsan faa'iidooyinka tamarta cusub, shirkaddu waxay diiradda saartay garoonka qaboojiyaha. , kuna dadaal inaad abuurto taxane ah keydinta tamarta, alaabada qaboojiyaha u roon deegaanka. Tani waxay u dejisay heerar cusub tiknoolajiyada xulashooyinka tamarta la cusboonaysiin karo.
Waxaan sidoo kale leenahay nidaam lasocod qol qabow, kaas oo la socon kara xaalada dhabta ah ee waqtiga qabow ee qolka qabow taleefanka gacanta, oo ay kujiraan heerkulka, xaddiga alaabta, hadii albaabku xiranyahay iwm. si loo ogaado dhibaatooyinka kaydinta qabow sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah si loo yareeyo khasaaraha.
Isla waqtiga wax soo saarka iyo iibinta, shirkaddu waxay fiiro gaar ah u leedahay hal-abuurnimada tikniyoolajiyadda, waxay siisaa dadka isticmaala xalka guud ee nidaamka qaboojinta qorraxda, waxayna macaamiisha siisaa runti hawl qabad leh, la maareyn karo, ammaan ah oo lagu kalsoonaan karo qaboojiyaha nidaamka maareynta caqliga leh. Daacadnimo, ka faa'iideysi wadaag iyo hal-abuurnimo isdaba joog ah ayaa ah qiyamka asaasiga ah ee shirkadeena.
Taizhou Xinneng Qalabka Qaboojiyaha Co., Ltd.
Shirkadeenu waa shirkad yar yar oo dhexdhexaad ah oo ku takhasustay soo saarida baalayaasha cadceedda ku shaqeeya.
Waqtigan xaadirka ah, waxaan ku siineynaa xalal qaboojiyaha qolalka qabow ee yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah. Waxaan leenahay nidaamyo qorraxda on-Roobka iyo ka-Roobka si aan u kala dooranno, oo aan u siino xalal tamarta qorraxda kala duwan sida ay u kala leeyihiin gobollada iyo dalal kala duwan. Nidaamka qaboojiyaha qorraxda ayaa aad ugu habboon meelaha aan lahayn koronto ama koronto qaali ah. Qaybta qaboojiyaha inverter ee buuxa waxay badbaadin kartaa 30% -50% tamar marka loo eego unugyada qaboojiyaha soo noqnoqda ee caadiga ah. In ka yar 3 sano, biilasha la keydsaday waxay iibsan karaan mashiin kale oo la mid ah.
In kasta oo shirkadda la aasaasay waqti aan fogayn, haddana waxaa aqoonsi ka helay inta badan isticmaaleyaasha isla warshadahaas. Shirkaddu waxay raacdaa mabda'a qaadashada amaahda aasaaska, inay tahay qof daacad ah, oo wax ku dhammaysata anshax. Waxay maamushaa faa'iidooyinka alaabada ceeriin ee qaboojiyaha ee Bariga Shiinaha waxayna siisaa adeeg tayo sare leh iyo dammaanad qaali ah shirkadaha gudaha iyo kuwa shisheeye ee ku sugan gobolka Yangtze River Delta.
Intii lagu gudajiray, shirkadeena oo leh alaab tayo sare leh iyo adeeg feker leh, ayaa ku guuleysatay amaanta inta badan isticmaaleyaasha. Intaas oo dhan, shirkadeenu waxay u hogaansantaa mabda'a daacadnimada, sumcadda marka hore iyo tayada marka hore, waxayna si kal iyo laab ah ugu adeegtaa macaamiisha cusub iyo kuwii hore.
Waxaan rajeyneynaa inaan is horumarino, isla horumarino isla markaana abuurno mustaqbal wanaagsan iyadoo loo marayo iskaashi daacadnimo iyo saaxiibtinimo leh.